» कालो लुगा लगाएर गुण्डा गर्दी गर्ने ? बिरोधिले रंगशाला छोएर मात्र हेर ! भ्याकुरो लखेटे झैं लखेट्छु !- पुन्य गौतम (भिडियो सहित) कालो लुगा लगाएर गुण्डा गर्दी गर्ने ? बिरोधिले रंगशाला छोएर मात्र हेर ! भ्याकुरो लखेटे झैं लखेट्छु !- पुन्य गौतम (भिडियो सहित) – हाम्रो खबर
कालो लुगा लगाएर गुण्डा गर्दी गर्ने ? बिरोधिले रंगशाला छोएर मात्र हेर ! भ्याकुरो लखेटे झैं लखेट्छु !- पुन्य गौतम (भिडियो सहित)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखीएको छ, पुरा हेर्नुहोस)चितवन,चैत । चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन मेची–महाकाली अभियान सुरु गर्ने भएको छ । धुर्मस–सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण गरिरहेको रंगशालामा आर्थिक समस्या पर्दै गएपछि चैत १० देखिअभियान सुरु गर्न लागिएको हो ।
प्रत्येक जिल्लाका पालिकाहरुलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । सो टोलीमा कलाकार कट्टेलसहित अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’, सामाजिक अभियन्ता अजुर्न भुसाललगायत रहनेछन् । महाकालीबाट सुरु गर्न लागिएको अभियान कन्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, सुर्खेत, कपिलवस्तु, रुपन्देही, परासी, नवलपुर र चितवनसम्म आउने छ ।रंगशालामा केही समय रोकिएपछि फेरि पूर्वी जिल्लाको अभियान सुरू गरिने फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले बताए । छोरा गुमाएकी खिमाको छोरा बनेर पुगे धुरमुस,रुदै रंगशाला बनाउनुस भन्दै हजारौ सहयोग गरिन।
हेर्नुहोस उत्त भिडियो..